Khabiirka Cajiibka wuxuu ogaanayaa sida loo Dhisayo Noocaaga Marka La Yidhaahdo Advertising Local
Haddii aad la mid tahay ganacsatada badankood, rajada laga qabo goynta waqtiga xayaysiinta, gaar ahaan marka aadan haysan qorshe dhaqaale oo aad la shaqeyn karto, waxay noqon kartaa mid aad u badan. Noqo sida ay u dhici karto, waxaa jira warar xajmi ah. Horumarinta maxaliga ah waa xayeesiin ganacsiyada madaxbannaan oo si fiican u qaban kara xitaa haddii aan haysan maalgelin muhiim ah.
Igor Gamanenko, oo ah khabiir hormood ah oo ka socda Semt Adeegga Dijital ah, ayaa wadaagaya 5 habab ee ugu muhiimsan ee la tixgeliyo:
1. Ka baqi cabsidaada shabakada internetka
Marka aad dooratid meesha aad u baahan tahay inaad maalgashato tamartaada (iyo malaha malaha waxoogaa lacag ah oo aad kaashaneyso), waxaad awood u yeelan kartaa in aad wax badan ka baaraandegto shabakada internetka ee aad ku isticmaasho qalabka sida Cradle. Tani waxay ka dhigan tahay inaadan joojin waxa aad qabanayso mar kasta oo aad u baahan tahay adoo isticmaalaya warbaahinta shabakadda ku salaysan - how to find my super member number mlc.
2. Ma u baahan tahay macaamiishaada iman kara inay ku raaxaystaan ​​deegaanka Sidoo kale waa inaad.
Ka qayb qaadashada kooxdaada internetka waa hab aan caadi aheyn oo lagu kordhin karo tixraacyada oo aad u soo ururinayso farriinta aad u leedahay shabakadaha websaydhka, waxaa weheliya hab aan caadi aheyn si aad u hesho fariin ku saabsan ganacsigaaga dhammaan meelaha saxda ah. 8)
3. Dhiiragelinta / kor u qaadida maxaliga ah
Si joogta ah oo online joogta ah oo soo jiidan doonta mashiinka search for seo iyo macaamiisha iman kara iyaga oo isticmaalaya, waxaad u baahan tahay inaad sameysid tiro isku mid ah oo sax ah (iyo saxda ah). Tixraacyada waxay ku xiran yihiin dariiqooyinkan hab aan caadi aheyn si ay u muujiyaan ganacsigaadu waa qayb ka mid ah bulshada degaanka. Tixraacyada waxay ka dhigayaan ganacsigaaga mid aad u muuqda oo lagu kalsoonaan karo mashiinno raadin .
4. Bartilmaameed fiican
Haddii aad ogtahay niche, suuq-geyntaada bartilmaameedku waxay noqon doontaa mid wax-tar badan marka la isku dayayo in la tago ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ama dabooli kara ugu yaraan hal channel oo soo koobay content. Sida ugu fiican ee aad u ogaato macaamiishaada, waxaad sii xoojin kartaa waxa loo yaqaan "keywords keywords" ee ku jira xayeysiiska lacagahaaga.
5. Maamul calaamaddaada bogga
Ka bilow Google My Business oo hubi in dhammaan macluumaadka aasaasiga ah ee magaca ganacsiga - cinwaanka, cinwaanka, iyo nambarka telefoonka sax yahay. Tani waxay aasaasi u tahay rikoorka raadinta degaanka. Tixraacyada la isku halleyn karo waxay ku dhisaan kalsoonida mashiinnada raadinta. Marka laga hadlaayo fursadaha aad u leedahay magacyo isku dhafan, meelo, ama lambarrada taleefannada meelo kala duwan oo webka ah, qalabyada raadinta shabakada ayaa laga yaabaa inay xitaa u maleynayaan in garsoorayaashu ay kala duwan yihiin ururada kala duwan.